ဗိုလ်ချုပ်သမီး၏ ဗိုလ်ချုပ်ဇာတိ ခရီးစဉ် | ဧရာဝတီ
ဗိုလ်ချုပ်သမီး၏ ဗိုလ်ချုပ်ဇာတိ ခရီးစဉ်
နန်းဆိုင်နွမ်| December 11, 2012 | Hits:5,034
3 | | ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျောက်ပန်းတောင်းတွင် ဟောပြောနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – /ဧရာဝတီ)
အနီရောင် ခွပ်ဒေါင်းအလံများကို လေထဲတွင် ဝှေ့ယမ်းကာ “အမေစု ကျန်းမာပါစေ” ဟုဟစ်အော် ဆုတောင်းရင်း သိန်းချီသည့် နတ်မောက် ပြည်သူများသည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုနေ ကြသည်။
ထိုနေ့က ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ဖြစ်သည့်အလျှောက် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မွေးရပ်မြေဖြစ်သည့် နတ်မောက်မြို့နယ်ကို ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူ လာရောက်ပြီး ဟောပြောမည် ဖြစ်သည့်အတွက် နတ်မောက် အနီးတ၀ိုက်ရှိ ရွာပေါင်း ၅၀ ကျော်နှင့် ပွင့်ဖြူ၊ အောင်လံ အစရှိသည့် မြို့နယ်များမှ ဒေသခံများပါ လာရောက် စုဝေး နားထောင်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေပြည်တော်မှ စတင် ထွက်ခွာလာပြီး တောင်တွင်းကြီး၊ မြို့သစ် စသည့် လမ်းတလျှောက်ရှိ ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံစကားပြော လာကာ နတ်မောက်မြို့သို့ ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် ရောက်ရှိလာပြီး ၂၅ မိနစ်ခန့်
“နတ်မောက်မြို့နယ်ဟာ ပညာတတ် အများစု မွေးတဲ့ နယ်မြေဖြစ်တယ်။ ဆက်ပြီးတော့ ဒီဟာကို ထိန်းသိမ်းသွားဖို့ ယုံကြည်တယ်။ ကျမဟာ နတ်မောက်သွေး ပါတဲ့အတွက် အရမ်း ဂုဏ်ယူတယ်။ပညာတတ်တွေ အများကြီး ထွက်လာအောင် ပညာရှင်တွေကိုလည်း လေးစားရမယ်။ နတ်မောက် ပြည်သူတွေဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ စံပြရလောက်တဲ့ လူတွေ ဖြစ်ရမယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မိန့်ခွန်းထဲတွင် ထည့်ပြောခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်းကို လာရောက် နားထောင်သည့် ပြည်သူအများစုသည် ၎င်း၏ မိန့်ခွန်းကို တကြိမ်တခါမျှ နားထောင်ဖူးခြင်း မရှိသကဲ့သို့ မိန့်ခွန်းဆိုသည်ကိုပင် နားထောင်ဖူးကြခြင်း မရှိကြောင်း နတ်မောက်နှင့် ၁၂ မိုင်ခန့် ဝေးသည့် ရွာငယ် တရွာမှ လာရောက် နားထောင်သည့် ဦးစိန်ထွန်းက ဆိုသည်။
“၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် တုန်းက နတ်မောက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမအကြိမ်လာပြီး မိန့်ခွန်းပြောဖို့ လုပ်တယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း လာ နားထောင်သေးတယ်။ အာဏာပိုင်တွေ ဘယ်လောက်တားတား အဘိုးတို့က လာမှာပဲ။ နတ်မောက်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မြို့ ဖြစ်ပြီး ဘာမှ မလုပ်ပေးခဲ့လို့ ဘာမှ မတိုးတက်ဘူး” ဟု နတ်မောက်မြို့ မြောက်ပိုင်းရပ် ပင်းကွေကြိုးမှ အသက် ၆၈ နှစ် အရွယ်ရှိသည့် ဦးဆေးနီက ပြောသည်။
နတ်မောက်မြို့သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးဖွားရာ ဇာတိမြေဖြစ်သော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နည်းပါးသေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုက်ပျိုးရေးတခုတည်းကိုသာ လုပ်ဆောင်နေရ သော်လည်း စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ နိမ့်ကျလျှက် ရှိနေကြောင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးက အစ ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိကြောင်း ကြားသိရသည်။
နတ်မောက် ပြည်သူများမှာ ၎င်းတို့ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ အားကိုးလိုကြကြောင်း တွေ့ရသည်။
“လူတယောက်ကို အရမ်းမယုံကြည်၊ အားမကိုးပါနဲ့။ ကိုယ်က ယုံကြည်အားကိုးပြီး ခေါင်းဆောင် တင်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလူက လူဆိုးဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နတ်မောက်တွင် ပြောခဲ့သည်။
အဆိုပါနေ့က ကလေး၊ လူကြီးများသည် ခွပ်ဒေါင်းတံဆိပ်ပါသည့် အင်္ကျီကိုဝတ်၊ ခွပ်ဒေါင်း စတေကာများကို မျက်နှာ၊ နဖူးတို့တွင် ကပ်ထားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်းကို နားထောင်နေကြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သိလိုသည့်၊ မေးလိုသည့် လိုအပ်ချက်များကို ပြည်သူများထံ မေးမြန်းပြီး တတ်နိုင်သမျှ ကူညီသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
အိုစည်ဒိုးပတ်သံနှင့် အတူ စည်းချက်မှန်မှန် ကနေသည့် အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် နတ်မောက်သား ကျောင်းသား တဦးက “သားက နတ်မောက်သား တယောက်ဖြစ်ရတာ အရမ်းဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကလည်း နတ်မောက် ဇာတိဆိုတော့လေ။အမေစုကိုလည်း သားက ချစ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် သားတို့အဖွဲ့က ဒီကို လာတာပါ” ဟု ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နတ်မောက်တွင် ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ဆွေမျိုးများနှင့်ခေတ္တ စကားပြောတွေ့ဆုံကာ မကွေးမြို့သို့ ခရီးဆက်ခဲ့သည်။ မကွေးမြို့သွား ကားလမ်း တလျှောက်တွင်လည်း စောင့်ဆိုင်းနှုတ်ဆက်သူများစွာကို တွေ့ရသည်။ ကြံကန်ရွာတွင် ၎င်း၏ ကားကိုရပ်ပြီး ပြည်သူများကို စကားပြောကာ မကွေးသို့ဆက်ခဲ့သည်။
ကားလမ်းတလျှောက်လိုက်လံ နှုတ်ဆက်သူများကို ပြန်လည် နှုတ်ဆက်နေရသည့် အတွက် ညနေ ၆ နာရီထိုးမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ကား မကွေးမြို့ ထိန်ထိန်သာ ဟိုတယ်သို့ ဆိုက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏လုံခြုံရေးအတွက်
NLD ပါတီဝင်များ လိုက်ပါလာသကဲ့သို့ အစိုးရဘက်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ယဉ်ထိန်းရဲများလည်း တာဝန်ယူထားကြသည်။
မကွေးမြို့ မြသလွန်ဘုရားရှိ ဘုရားဝန်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောပြောပွဲ လုပ်မည်ကို သိသဖြင့် စောင့်ဆိုင်း နေသူများ များပြားလှသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် မကွေးကွင်းသို့ ရောက်လာပြီး လူထုဟောပြောပွဲ ကျင်းပခဲ့သည်။
မကွေးတွင် ဟောပြောခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းမှာ မိဘများက ကလေးသူငယ်များကို ကိုယ်ပိုင် စဉ်းစားတတ်ရန်၊ မေးခွန်း ထုတ်တက်စေရန် သင်ပေးသင့်ကြောင်း၊ ထိုနည်းတူ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ များကလည်း ကလေးများ တွေးတောတတ်စေရန် လုပ်ပေးသင့်ကြောင်း၊ ကလေးများ မေးသည့်မေးခွန်းကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖြေဆိုသင့်ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၂၀ ကျော်က
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးသည် ကမ္ဘာတွင် အလွန်ကျော်စောခဲ့ကြောင်း၊ ကလေးများအား မစပ်စု၊ မတွေးတောခိုင်းပါက
နောင် နှစ် ၅၀ တွင် မြန်မာပြည် ပညာရေး အလွန် ဆိုးဝါးသွားနိုင်ကြောင်း အစရှိသည်ဖြင့် ဖြစ်သည်။
“အပြောင်းအလဲ လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကျမတို့ဘက်က တင်းတင်းမာမာနဲ့ မလုပ်သင့်ဘူး။ ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း နည်းနဲ့ အများပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိမယ့် ဟာကို ရှာကြည့်ပြီးတော့ လုပ်သွားရမယ်။ အခု ကျမတို့ သွားနေတဲ့ လမ်းက လွယ်တဲ့ လမ်းတခုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ လမ်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခက်ခဲတဲ့ လမ်းခရီးကို အစဉ်သင့် ဖြစ်နေအောင် ကျမတို့ ပြည်သူတွေနဲ့ အတူတကွ ခရီးထွက်ကြမယ်။ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေကို လူထု အနေနဲ့ အများကြီး လုပ်ထားဖို့ လိုတယ်။ ဒါမှ ကောင်းမွန်တဲ့ နိုင်ငံတရပ်ဖြစ်လာမယ်” ဟု သူက ပြောဆိုအပြီးတွင် ပြည်သူအများက အားပေး ထောက်ခံသည့် အနေဖြင့် လက်ခုပ် သြဘာပေးရာ ကွင်းတခုလုံး ညံသွားလေသည်။
မကွေးပြည်သူ များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် အားကိုးလိုကြောင်း၊ ၎င်းအသံကို နားထောင်လိုက်ရသဖြင့် အလွန်ပင် စိတ်ဓာတ် တက်ကြွလာကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြင်တွင် မြင်လိုက်ရသည့်အတွက် အလွန်ပင် ၀မ်းသာမိကြကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိုက်ပါလာသည့် ကားသည် မကွေးမြသလွန် ဘုရားကွင်းမှ နောက်တနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီ ခွဲခန့်တွင် ထွက်ခွာလာကာ ရေနံချောင်းသို့ ခရီးဆက်ခဲ့ ပြန်သည်။ ရေနံချောင်း ဒေသခံများကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလာမီ ကားလမ်းပေါ်တွင် ရပ်စောင့်ပြီး ခွပ်ဒေါင်းအလံများကို လေထဲတွင် ဝှေ့ယမ်းကာ
ကြိုဆိုနေသကဲ့သို့ ဖြတ်သွားသည့် ကားတိုင်းကို လိုက်လံ “အမေစု ကျန်းမာပါစေ” ဟု အော်နေကြသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အငွေ့အသက်များ လွှမ်းမိုးနေသည့် ရေနံ့သာ သခင်မြေမှလည်း အမေစုကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆို ပါတယ်” ဆိုသည့် ဗီနိုင်း ဆိုင်းဘုတ်ထူ၍ ကြိုဆိုနေကြသည် ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
ရေနံချောင်းမှတဆင့် ကျောက်ပန်းတောင်းသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီး ဆက်ခဲ့ပြန်သည်။
ယင်းဒေသတွင် သံဃာတော်များက ဗီနိုင်းဆိုင်းဘုတ်ကို ကိုင်ဆောင်လာပြီး ခေါင်းတွင် ခွပ်ဒေါင်းပုံပါ အနီရောင် ပုဝါကို စည်း၍ ပါးနှစ်ဘက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံကပ်ထားကာ NLD တံဆိပ်ပါ လွယ်အိတ်ကို လွယ်ထားသော ကိုရင်အပါး ၂၀၀ ကျော်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
အဖြူအစိမ်းဝတ် ကျောင်းသားကျောင်းသူ များကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုသည့် ဗီနိုင်းချပ်များကို ကိုင်ဆောင်ပြီး တေးသီချင်းများကို ဟစ်အော်သီဆိုကာ ချီတက်လာကြသည်။
ကျောက်ပန်းတောင်း ဒေသခံ တဦး ဖြစ်သည့် ဦးလှအေးက “ကျောက်ပန်းတောင်းကို လာမယ်ဆိုပြီး လုပ်ခဲ့ပေမယ့် အမြဲ
ပျက်တယ်။ သူလာမယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျနော်တို့ အမြဲတမ်း လာစောင့်ပါတယ်။ အခု သူလာတဲ့အတွက် အရမ်း ၀မ်းသာပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာပြည်သည် ယခုလက်ရှိ အခြေအနေထိ မည်သို့မျှ ထူးခြားမှု မရှိသေးကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်ကမူ ထိုင်းနှင့် မြန်မာ ကွာဟချက် မရှိကြောင်း၊ ယခု နောက်ဆုံး ၎င်းနေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားစဉ် ကထိုင်းမြေကို ခြေမချခင် လေယာဉ်ပေါ်မှ ကြည့်သည့်အခါ ထိုင်းနိုင်ငံသည် မီးများလင်းထိန်၍ အလွန်လှနေကြောင်း၊ အလွန်ပင်တိုးတက်နေသည်ကို မြင်ရကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျောက်ပန်းတောင်းသားများကို ပြောပြသည်။
“နိုင်ငံက စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့လို့၊ အုပ်ချုပ်ရေးညံ့လို့ ဆင်းရဲတာပါ။ ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေး နားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်သူက ဘာလုပ်လဲဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အစိုးရသုံးနေတဲ့ ငွေမှန်သမျှဟာ ပြည်သူ့ငွေတွေပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် အစိုးရက ဘယ်လို သုံးနေတယ် ဆိုတာကို မေးမြန်းစုံစမ်းဖို့ ပြည်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်း၏ ကျောက်ပန်းတောင်း မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်ပြောသွားသည်။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ချမ်းသာမှုကို ကြည့်မည်ဆိုပါက လူတစု၏ ချမ်းသားမှု အဆင့်အတန်းကိုသာ ကြည့်၍မရကြောင်း၊ အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသူများ၊ နေထိုင်မှု အားနည်းသူများကို ကြည့်၍သာ နိုင်ငံက မည်မျှ ဆင်းရဲချမ်းသာသည်ကို သိနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျောက်ပန်းတောင်းမြေမှ တောင်သူဦးကြီး တဦးဖြစ်သူ ဦးထွန်းလှိုင်က “ဒီဒေသကို လာရောက်ပြီး စကားပြောပေးတဲ့ အတွက် အရမ်း အားရှိပါတယ်။ ဒေါ်စု အသံတွေ၊ ရုပ်တွေကို ရေဒီယိုတို့၊ စာစောင်တို့မှာပဲ ဖတ်ဖူး၊ ကြားဖူးတယ်။ အခုတော့ အပြင်မှာ
ဗိုလ်ချုပ်သမီးကို တွေ့ရတော့ အရမ်း ၀မ်းသာပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကျောက်ပန်းတောင်းတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး ညောင်ဦးလေဆိပ်သို့ ညနေ ၅ နာရီ လေယာဉ်အမီ သွားရောက်ကာ ရန်ကုန်သို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မကွေးတိုင်း ခရီးစဉ်အတွင်း မြင်ရသမျှ ဒေသခံများ အားလုံးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားကိုး၊ ယုံကြည်နေကြသည်မှာ ပေါ်လွင်လှသည်။
ထိုဒေသ တလျှောက်ရှိ ပြည်သူများသည် ပဲ၊ နှမ်း သီးနှံများ စိုက်ပျိုးသည့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ဆောင် နေကြရသူများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုနှစ် မိုးခေါင်သဖြင့် ပဲများ၊ နှမ်းများ အထွက်နည်းလျှက်ရှိရာ စီးပွားရေးအတွက် စိုးရိမ်နေကြ သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောပြကြသည်။
မိုင်းလားမှာ ကာစီနို ကစားမလား
4 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Shwe Yoe December 12, 2012 - 5:52 am	Her great grandfather Bo Min Yaung and father General Aung San injected in her blood to beagreat woman. Nat Mauk really is Bethlehem of Burma. We all are appalled to see her in the town where she came from.
Reply	Salai Lian December 12, 2012 - 6:01 am	It isabeautiful thing we have seen harmonious living in Nat Mouk where The ethnic Burmans and the Chins live side by side for many generations. The Union of Burma will beabeautiful one if we all can live with love and kindness between different ethnics.
Reply	Chinlay January 14, 2013 - 8:43 pm	Yes, U Pha was Chin and Daw Su was Bamar.
I am proud of Daw Aung San Su Kyi who is my ethnic great lady.
Long life Daw Su.
Reply	Chinlay January 14, 2013 - 8:53 pm	Yes. U Pha was Chin and Daw Su was Bamar,
I am proud of Daw Aung San Su Kyi who is my ehtnic great lady .
ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် နိုင်ငံရေး မူဘောင် NLD ရေးဆွဲ
၂၀၁၅ အလွန် သမ္မတနေရာ ဦးရွှေမန်းကို NLD ထောက်ခံမှာလား
ဒီတကြိမ်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD မှားပြန်ပြီ